MW CMC Oo Xadhiga-kajaray Warshada Saliida Imwaan Ee jigjiga - Cakaara News
MW CMC Oo Xadhiga-kajaray Warshada Saliida Imwaan Ee jigjiga
Jigjiga(CN) Axad, 7da February 2016, madaxwaynaha DDSI mudane Cabdi Maxamuud Cumar ayaa saaka xadhiga kajaray warshada saliida ee Imwaan oo kutaala keelaa harar kasoo horjeedka jidka 30ka ee magaalada jigjiga.
Hadaba xadhig kajarka kadib, ayuu madaxwaynuhu indha-indheeyay qaab-shaqeedka warshada iyo nidaamyada ay marto dhalinta saliidu.
madaxwaynaha DDSI mudane Cabdi Maxamuud Cumar oo furitaankii xaflada kahadlay ayaa ugu horayn u hambalyeeyay iskaashatada kakooban 5ta xubnood ee kubahoobay hirgalinta warshadan isagoo sheegay in aas-aaska warshadaha yar yar ay yihiin wadadii loo marayay horumarka warshadaha waawayn iyo inay fursad shaqo abuur usameeyaan dad tiro badan oo deegaanka ah. Wuxuuna madaxwaynuhu intaa raaciyay, inay kudayasho mudan yihiin.
Sidoo kale, Waxaa furitaankii xaflada xadhig kajarka warshada kahadlay maareeyaha guud ee warshada saliida imwaan mudane Cabdirisaaq Xiis Khaliif oo sheegay dadaalada ay usoo mareen inay warshadan kahirgaliyaan xarunta deegaanka ee jigjiga iyo inay awood uleedahay inay maalinkii shiido 24kun oo kiilo oo sisin ah ama midhaha kale ee saliida leh oo u dhiganta 12kun oo litir oo saliid ah. Waxaa intaa dheer, inay warshadu soo saari karto maalinkii 12kun oo maankaal ah (calafka xoolaha) iyadoo waliba wakhti xaadirkan shaqo abuur u samaysay 50 qof.
Warshadan ayaa qorshaheeda 1, aad yahay inay shacabwaynaha deegaanka kahaqabtirto baahida saliida nooca loo yaqaano macsarta iyadoo higsigeeda xiga uu yahay inay xili dhow dibada udhoofiso. Waxaana xusid mudan in midhaha caydhiin ee lashiidayo ay yihiin midhaha sisinta kasoo go’day beeraha deegaanka.
Xubnaha iskaashatada ah ee kubahoobay warshadan ayaa isugu jira 3 qaran-joog ah iyo 2 qurbajoog ah. Waxaana kujira qaar kamid ah madaxwaynayaashii hore ee deegaanka soo maray khaasatan mudane Maxamed Macalin Cali(khadar)